အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ပိုင် ရုပ်မြင် သံကြား မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် ၏ ၂၀၂၁ ကွဒ်စ်နေ့ မိန့်ခွန်းအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
မေ ၈, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၄ ညနေ News Code : 1138951 Source : ABNA Link:
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် သည့် ၂၀၂၁ ကွဒ်စ်နေ့ မိန့်ခွန်းတွင်မိန့်ကြား သည်မှာ - ဇီယွန်( ဇိုက်ယူနစ် (အစ္စရေး)) များသည် မိမိတို့ လုယူ ထားသည့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ အား အကြမ်းဖက် အခြေစိုက် စခန်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ လိုက်ပါတယ်။ အစ္စရေး သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်မဟုတ်ပါ။ မွတ်စလင်မ် လူမျိုးစုများအား တိုက်ခိုက် နေသည့် အကြမ်းဖက် အခြေစိုက် စခန်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် သည့် ၂၀၂၁ ကွဒ်စ်နေ့ မိန့်ခွန်းတွင်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ မိန့်ခွန်းစာသား အပြည့်အစုံ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း ကိစ္စသည် အစ္စလာမ်နောက်လိုက် နောက်သား များ အတွက် အရေးအကြီး တကာ အကြီးဆုံး နှင့် လက်ရှိ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ် သည့် အရင်းရှင် စနစ် ၏ ပေါ်လစီများ သည် လူမျိုးစု တစ်စု အား မိမိ၏နေအိမ် မှ လည်းကောင်း ၊ မိမိတို့၏ ဘိုးဘေး ဇာတိမြေ မှ စွန့်လွတ် စေခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အကြမ်းဖက် အစိုးရ တစ်ခု ကို ထူထောင်စေပြီး ၊ တခြားလူမျိုးစု နေဖို့ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
အားအနည်း တကာ အနည်းဆုံး နှင့် အခြေအမြစ် မရှိတကာ မရှိဆုံး ဇီယွန် အစိုး (အစ္စရေး အစိုးရ ) ထူထောင် ရခြင်း၏ ယုတ္တိဗေဒ မှ အဘယ်နည်း ? ဥရောပ သားများ ၏ ပြောဆို ချက် အရ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျူး လူမျိုးများ အပေါ် ရက်စက် ညှဉ်းပန်းခဲ့ကြပါသည်။ ဤအတွက် ကြောင့် အနောက်အာရှ တိုက်တွင် လူမျိုးစု တစ်စု အား ပြည်ပျောက်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ၎င်း လူမျိုး အား ရက်ရက်စစက်စက် သတ်ဖြတ် ခြင်းဖြစ် ဂျူးလူမျိုး အတွက် လက်စားချေ ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအတွေးအခေါ် ဖြင့် အနောက်တိုင်း အစိုးရ များ သည် မိမိတို့၏ မယိမ်းယိုင်သည့်ထောက်ခံမှု ၊ ရူးသွပ်နေသည့် အားပေးမှု ဖြင့် ဇီယွန် အစိုးရ (အစ္စရေး အစိုးရ) အား မှီခိုအားထား မှု ပြုပေးထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မိမိတို့ ၏ လိမ်ညာ ပြောဆိုမှုများ ဖြင့် လူအခွင့် အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ အား ချိုးဖောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤ ရယ်မော စရာဖြစ်ရပ် နှင့် ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ် သည် နှစ် ၇၀ ကျော် ရှိနေပါပြီး။ ဆက်လက်လည်း ဖြစ်နေပါသည်။ ကာလအနည်းငယ် ကြာပြီးခေါင်းစဉ်များ တိုးတိုးတပ် ၍ လာပါသည်။
ဇီယွန် များ အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်းအား တရား မဝင်လုယူပြီး ပထမဆုံးနေ့ ကပင် အကြမ်းဖက် အခြေစိုက် စခန်း အဖြစ် ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အစ္စရေး သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်မဟုတ်ပါ။ မွတ်စလင်မ် လူမျိုးစုများ ကို တိုက်ခိုက်နေသည့် အကြမ်းဖက် အခြေစိုက်စခန်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သည့် အစိုးရ ကိုေ တ်ာလှန် ခြင်းသည် ရက်စက် ညှဉ်းပန်း မှု ၊ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှု ကို တော်လှန် ခြင်း ၊ အကြမ်းဖက် သမား များ ကို တော်လှန် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ သမိုင်းပေး တာဝန် သည် ကျွန်ုပ် တို့ အားလုံး၏ တာဝန် ဝတ္တရား ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်သားထိုက်သည့် အချက် တစ်ချက်မှာ နယ်ချဲ့ အစိုးရ အား ၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် ထူထောင် ခဲ့သော် လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ၏ ဒေသများ အရေးကြီး ပြီး ထိလွယ် ရှလွယ်သည့် နေရာများ ကို သိမ်းပိုက် ကျူးကျော် ဖို့ ပြင်ဆင်မှု ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အလျှင် စတင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ တွင် အာဏာရှင် စနစ် ၊ အစွန်းရောက် စနစ် နှင့် မျက်ကန်း အမျိုးသားရေးစနစ် တို့ကို ထူထောင်နိုင်ရန် ၊ အာဏာရှင် အစိုးရများ ၏ အလိုကျ သဘောကျ ပြုပေးမည့် အစိုးများ ကြီးစိုး နိုင်ရန် အနောက်နိုင်ငံများ ၏ ကြိုးပမ်းနေသည့် ကာလဖြစ်ပါသည်။ အီရန် ၊ တူရကီ နှင့် အနောက်အာရှ နိုင်ငံများ မြောက် အာဖရိက နိုင်ငံ များ ၏ နှစ်ပေါင်းများ စွာ ဖြစ်ရပ်မှန်များ ကို လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း ဖြင့် ခါးသက်သည့် သမိုင်းမှန် ကို ထင်ရှား ပေါ်လွင် စေပါသည်။ မွတ်စလင်လူမျိုးစု ၏အားနည်း ချက် နှင့် စည်းရုံးရေး ပျက်သုံးမှု ကြောင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ သည် အရက်စက် အညှဉ်းပန်း ခံ အကြမ်းကြုတ်ခံ အကျူးကျော် ခံ ဖြစ်သွားရပါသည်။ ဤ ထိုးနှက်မှု သည် ကမ္ဘာ အင်အားကြီး နိုင်ငံများ မှ အစ္စလာမ် နောက်လိုက် နောက်သားများ ကို အပေါ် ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သံဝေဂ ယူစရာ နေရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်၊ထို ကာလတွင် ဇီယွန်ဝါဒီ ကာရွန် ( အရင်းရှင်များ ) နှင့် ကွန်မြူနစ် တို့သည် ဇီယွန် စနစ် အား ပူးပေါင်းစည်းလုံးစေခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိန် နိုင်ငံ သည် ပထမဆုံး လုပ်ကြံ ဇာတ်ခင်းခြင်း ကို အစီအစဉ် ဆွဲ ကြိုးပမ်းခဲ့ ပါသည်။
ဇီယွန် ငွေရှင်ကြေးရှင် (အရင်းရှင်များ ) သည် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ငွေကြေး များ နှင့်လက်နက်များ ဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ပါသည်။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု သည် ပထမဆုံး တရားမဝင် ထူထောင် ထားသည့် အစိုးကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ပေးပြီး ဂျူး အမြောက် အများ ကို ထိုနေရာသို့ စေလွတ်ခဲ့ ပထမဆုံး အစိုးရဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်မှ ကြည့် လျှင် နယ်ချဲ့ အစိုးရ ၊ ကျူးကျော် တရားမဝင် အစိုးရ သည် ထိုခေတ် ထိုအချိန်အခါ ၏ အစ္စလာမ် လောက ၏ မကောင်းသည့် အခြေအနေ ၏ ရလာဒ် ဖြစ်ပါသည်။ အခြား တစ်ဖက် မှ ကြည့် မည်ဆိုရင် ဥရောပ သားများ ၏ ကြံစည်မှု ၊ ကျူးကျော်မှု ကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ အခြေအနေသည် အရင်ကလို မဟုတ်တော့ ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ဤ ဖြစ်ရပ်မှန ကို အစဉ်အမြဲ ကြည့်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ တရားခွင့် ၏ ချိန်ခွင်လျှာသည် အစ္စလာမ် လောက ၏ အကျိုးအမြတ် ဘက်သို့ အလေးသာ ပေးနေပါသည်။ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် တို့ တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဖြစ်ရပ် အမျိုးမျိုး များသည် အနောက် တိုင်းသားများ ၏ ဖွဲ့စည်းမှု ၊ အုပ်ချုပ်မှု ၊ စာရိတ္တ ချို့ ယွင်းမှုများ နှင့် အားနည်း မှုများကို ကမ္ဘာ အရှေ့ တွင် ပေါ်လွှင် စေခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင် သမ္မတ ရွေေးကာက်ပွဲ များ ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များ အခက်အခဲ နှင့်ရင်ဆိုင် ရချိန်တွင် ဤ နိုင်ငံ ၏ လေလုံးထွာ၊မာန ထောင်လွှားနေသည့် အာဏာပိုင်များ ခေါင်းဆောင်များ အကြီးအကျယ် အရှက် ရစေ ခဲ့ပါသည်။ ထိုပြင် အမေရိကန် နှင့် ဥရောပ တွင် ပြန့်နှံ နေသည့် ကိုရိုနာ ရောဂါ အပေါ် တစ်နှစ် ပတ်လုံး အောင်မြင်စွာ မကိုင်တွယ် နိုင်သည့် အတွက် လည်း အရှက် ကွဲခဲ့ရပါသည်။ အရေးအပါဆုံး ဥရောပ နိုင်ငံများ ၏ နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး မငြိမ်မသက်မှုများ အားလုံးသည် အနောက်နိုင်ငံများ ၏ ကျဆင်းမှု ၊ ပြိုပျက်မှု ၏လက္ခဏာ များဖြစ်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အထိလွယ်ဆုံး ၊ အရှလွယ်ဆုံး အစ္စလာမ် မီ ဒေသများ တွင် ခုခံ ကာကွယ်ရေး တပ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ၊ ၎င်းတို့၏ ခုခံ မှု နှင့် တိုက်ခိုက်မှု ဆိုင်ရာ အင်အားများ တိုးတက် လာခြင်း ၊ မွတ်စလင်လူမျိုးစု များ အကြား မိမိကိုယ်ကို သတိပြု မိလာခြင်း သဘောပေါက်လာခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက် နှင့် ဇွဲ ရှိလာခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဆိုင်ရာ ၊ ကုရ်အာန် ဆိုင်ရာ ညာသံများ ဘက်သို့ စိတ်ဝင်စားလာမှု တွင် တိုးတက်လာခြင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက် လာမှု၊ လူမျိုးစုများ တွင် လွတ်လပ်ရေး ကို နှစ်သက်လာမှု ၊မိမိကိုယ်ကို အားကိုးမှု တွင် မြှင့်တက်လာမှု၊ ဤ အရာများအားလုံးသည အနာဂတ် အတွက် မင်္ဂလာ ရှိသည့် လက္ခဏာ ရပ်များ ဖြစ်ပါသည်။
ဤမင်္ဂလာရှိသည့် အနာဂတ် တွင် မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပြန်အလှန် ကူညီဖေးမ ရေး တွင် အခြေခံ ကျသည့် ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက် သည် မဖြစ်နိုင်စရာလည်း မရှိပေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အပြန်အလှန် ကူညီဖေးမ ရေးအတွက် ဗဟို ဌာန အဖြစ် ပါလက်စတိုင်း ကိစ္စ ဖြစ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပါလက်စတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံး နှင့် ကွဒ်စ် ရှရီးဖ် ဖြစ်ဖို့ လိုပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အမှန်တရား တစ်ခုမှ ဟဇရသ် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ တောက်ပနေသည့်နှလုံးသား တွင် ရမ်တွာန် လမြတ် ၏ သောကြာ နောက်ဆုံး အပတ် ကို ကွဒ်စ်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် (အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်မှ) ထည့်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကွဒ်စ်ရှရီးဖ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး မွတ်စလင်မ်များ ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကူညီဖေးမမှု သည် ရန်သူ ဇီယွန် (အစ္စရေး ) နှင့် ၎င်းတို့ ၏ မဟာမိတ်များဖြစ်သည့် အမေရိကန် နှင့်ဥရောပ အတွက် ကြောက်စရာ ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဤရာစုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး သဘောတူမှု ဆိုသည့် အစီအစဉ်၏ မအောင်မြင် ပြီးနောက် တရားမဝင်အစိုး ရ နှင့် အချို့ အားနည်း အားပျော့ သည့် အာရပ် အစိုးရများ အချို့ နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံ မှု သည် ဤ အမှန်တကယ် (၎င်းတို့) ကြောက်နေသည့် ကြောက်စရာ မှ ထွက်ပြေးသည့် မအောင်မြင်မှု ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ကျနော် ယုံကြည်စွာ ဖြင့် ပြောနိုင်ပါသည်။ ဤ(၎င်းတို့၏) ကြိုးပမ်းမှု များသည် အာနိသင်ရှိ မည်မဟုတ်ချေ။ ရန်သူ ဇီယွန် (အစ္စရေး ) အစိုးရ ၏နေဝင်ချိန် စနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ နေဝင်မှုသည် ရပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
အနာဂတ် အတွက် အရေးကြီး အချက် ၂ ချက် ရှိပါသည်။ ပထမ အရေးကြီးအချက်မှာ ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ အတွင်း ခုခံ တော်လှန်ရေး များဆက်လက် တည်ရှိနေခြင်း ၊ဂျေဟတ်ဒ် တပ်ဦး နှင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်မှု အတွက် အားကောင်း အောင်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်မှာ မွတ်စလင်မ် လောက နှင့် အစိုးရများ ဘက်မှ ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ် များ အတွက် လက်တွေ့ ကူညီဖေးမ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာပိုင်များ ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာ သည့် ပညာတတ်များ ၊အိုလမာယေဒီးန် ၊ ဂျမာအသ်သူ ၊ ဂျမအသ်သားများ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ စိတ်အား ထက်သန် သည့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ နှင့် အခြား အလွှာ အသီးသီးများ အားလုံးတို့သည် မိမိတို့ ၏ နေရာအသီးသီးမှ အားလုံး အတူတူ လှုပ်ရှား တွင်ပါဝင် လှုပ်ရှားစေလိုပါသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများ သည် ရန်သူ ၏ လှည့်စားမှု လှည့်စား လှည့်ဖျား မှု ကို တားဆီးပေးလိုက်မည်။ ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ကတိပြုထား သည့် ကတိတော် امیریدونکیدافالّذینکفرواھمالمکیدونဖြစ်ပါမည်။ ပြီးနောက် နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ကိုပြသနေသည့် واللہغالبعلیامرہ؛ولکناکثرالناسلایعلمون
ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလဗ် အစ္စလာမ်မီ အနေဖြင့် ဤမိန့်ခွန်း ပြီးနောက် အာရဘီ ဘာသာစကား ဖြင့် မိမိ၏ ဟောပြောမှုကို စလေ၏ ။ ၎င်းမိန့်ခွန်း ၏ ဘာသာပြန်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင် အာရပ် လူငယ်လူရွယ် များ ကို ၎င်းတို့ ၏ ဘာသာ စကား ဖြင့် ပြောကြား လိုပါ သည်။
လွတ်လပ်ရေး ကို မြတ်နိုးကြသည့် အာရပ် လူမျိုး လူငယ်လူရွယ်များ ကို စလာမ် ပို့သ ပါ၏။ ပါလက်စတိုင်း နှင့် ကွဒ်စ် အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နေသည့် လူထု နှင့် အလ်အက်ဆွာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၏ မိုဂျာဟစ်ဒ်များ ကို စလာမ် ပို့သပါ၏။
ဇွဲ၊လုံလရှိရှိဖြင့် ရပ်တည် ခဲ့သည့် ရှဟီးဒ် တော်များ နှင့် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် သည် မိုဂျာဟစ်ဒ်များ အပေါ် စလာမ် ပို့သ ပါ၏။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အသက်များ ကို စတေးခဲ့ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရှဟီးဒ် အဲဟ်မဒ် ယာစင်န် ၊ ရှဟီးဒ် ဆရက်ဒ် အဘာစ်မူစဝီ ၊ ရှဟီးဒ် ဖသ်ဟာ ရှကာကီ ၊ ရှဟီးဒ် အေမါဒ် မွဂ်နီယေ ၊ ရှဟီးဒ် အဗ်ဒိုလ်အဇီးဇ် ရန်သေစီ ၊ ရှဟီးဒ် အဘူမဲဟ်ဒီ အလ်မိုဟဒစ် နှင့် ဇွဲလုံလ ဖြစ်ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြသည် ရှဟီးဒ်များ အားလုံး၊ရှဟီးဒ် များ အားလုံး တွင် လူသိရှင်ကြား ဆုံး ရှဟီးဒ် ကာစင်မ် ဆိုလိုင်မန်နီ ပေါ်သို့ စလာမ် ပို့သပါ၏။ ဤရှဟီးဒ် များ အားလုံး သည် မိမိတို့၏ မင်္ဂလာ ရှိသည့် ဘဝ နှင့် ဇွဲလုံလ ရှိရှိနှင့်မားမား မတ်မတ် စိတ်ဓာတ်နှင့် ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအတွက် အထူး အာနိသင်ရှိမှု ၊ အကျိုး သက်ရောက်မှု ကို ဖြစ် စေခဲ့ပါ သည်။
ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်များ နှင့် ဇွဲ၊လုံလရှိရှိဖြင့် ရပ်တည် ခဲ့သည့် ရှဟီးဒ် တော်များ၏ သန့် ရှင်း စင်ကြယ် သည့်သွေးများ သည် ဤ မင်္ဂလာရှိသည့် အလံတော် အား မှထောင်ရတွင် လည်းကောင်း မြှင့်တင် ရတွင် လည်းကောင်း ပါလက်စတိုင်း ဂျေဟတ်ဒ် ၏ အတွင်းပိုင်အင်အား ကို လည်းကောင်း အဆ တစ်ရာ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ချိန်က ပါလက်စတိုင်း လူငယ်များ အနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို ကျောက်ခဲများ ပစ်ပေါက်၍ ကာကွယ် ခဲ့ကြပါသည်။ယနေ့ ပစ်မှတ်ကို တိကျစွာ ချိန်ပြီး ပစ်စွမ်း နိုင်သည့် ဒုံးကျည်များ နှင့် ရန်သူကို အဖြေပြန်ပေးနေပါပြီး။
ပါလက်စတိုင်း နှင့် ကွဒ်စ် ကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် တွင် ((အလ်အရ်ဇိုမိုကဒစဟ်)) သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သည့် မြေ ဟု ခေါ်ဆို ထားပါသည်။ ဤသန့်စင် စင်ကြယ် သည်မြေ အား ဆယ်နှစ်ထက် မက မသန့်စင်တကာ မသန့်စင်ဆုံး ၊ အဆိုးရွားတကာအဆိုးရွားဆုံး သူများ မတရားသိမ်းပိုက်ထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ မတရား သိမ်းပိုက် ထားသည့် ရှိုင်တွာန် မိစ္ဆာ များ သည် လူကောင်း လူမွန်များ ၏ သွေး နှင့်မြေကို ရောစေခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အလွန်တရာ အရှက် တရား ကင်းမဲ့ စွာ ဖြင့် ဝင်ခံ ထားပါသည်။
ဤသူများသည် လူမျိုးရေး အစွဲကြီးသူများဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ကပင် ဤမြေပိုင်ရှင်များ ကို သတ်ဖြတ် ခြင်းများ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း များဖမ်းချုပ်မှု များ နှင့် ဒုက္ခပေး ခြင်းများ ကို ပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လည်း အလ်ဟမ်ဒိုလစ်လ္လာဟ် ၊ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒများ အသီသများ မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။
ပါလက်စတိုင်းသည် ရှင်သန် နေဆဲဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့ ၏ ရုန်းကန် ကြိုးပမ်းမှု ဆက်လက် ရှိနေ မည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အကူအညီ အဖေးအမ နှင့် မကောင်းဆိုးရွား ရန်သူများ ကို လွမ်းမိုး အောင်နိုင် မည် ဖြစ်ပါမည်။ ကွဒ်စ် ရှရီးဖ် နှင့် ပါလက်စတိုင်း တစ်နိုင်ငံ လုံး ၏ မြေသည် ဤ နိုင်ငံ ပြည်သူ လူထု ၏ မြေ ဖြစ်ပါသည်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ၎င်းတို့ ကို ပြန်ပြီး ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။وماذالکعلیاللہبعزیز
ပါလက်စတိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး မွတ်စလင်မ်လူမျိုးတိုင်း ၊ မွတ်စလင်မ် အစိုးတိုင်း တာဝန် ဝတ္တရားများ ရှိပါသည်။ သို့သော် ရုန်းကန် ကြိုးပမ်း မှု ၏ ဗဟို ဌာနသည် ပါလက်စတိုင်း ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ပါလက်စတိုင်း မြေ အတွင်း နေထိုင်သူများ ဖြစ်စေ အပြင် တွင်နေထိုင်သူများ ဖြစ်စေ ၎င်းတို့ အားလုံးကို ပေါင်းရပါမည်။ ၎င်းတို့၏ အရေ အတွက် မှာ ၁၄သန်း ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ အားလုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း ၊ ရည်မှန်းချက် တူခြင်း ဖြင့် ကြီးကျယ် သည် လုပ်ရပ် ကို လုပ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပါလက်စတိုင်း ညီညွတ်ရေး ၏ ရန်သူမှာ ဇီယွန် (အစ္စရေး) အစိုးရ ၊ အမေရိကန် နှင့် အချို့ နိုင်ငံရေး အင်အား များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ပါလက်စတိုင်း ညီနှောင်များ အကြား စည်းလုံး ညီညွတ်မှု မပြို ပျက် သမျှ ပြင်ပ ရန်သူ သည် ဘာမှ ဖျက်စီး နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ဤ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အတွက် ပါလက်စတိုင်း မြေ အတွင်း ဂျေဟာဒ် နှင့် ရန်သူ အပေါ် မယုံကြည်မှု ကို အခြေခံ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပါလက်စတိုင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ပေါ်လစီများ တွင် ပါလက်စတိုင်း တို့၏ ရန်သူ အစစ် ၊အဓိက ရန်သူများ ဖြစ်သည့် အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန် နှင့် မကောင်းဆိုးရွား ဇီယွန် (အစ္စရေး) တို့ အပေါ် လုံဝ မယုံကြည်မိဖို့ လိုပါသည်။
ပါလက်စတိုင်းများ အနေဖြင့် ဂါဇာ တွင် ဖြစ်စေ ၊ ကွဒ်စ် တွင် ဖြစ်စေ ၊ ဂျော်ဒန် အနောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်စေ ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် အကျူးကျော်ခံ နယ်မြေများတွင် ဖြစ်စေ ၊ တဲစခန်းများ တွင် ဖြစ်စေ ၊အားလုံး စုပေါင်းပြီး စည်းရုံးမှု တစ်ခုကို ထူထောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အပြန်အလှန် အဆက်အသွယ် ရှိစေမည့် နည်းဗျူဟာ ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသတိုင်း အခြား ဒေသကို ပါ ကာကွယ် ပေးရမည်။ ၎င်းတို့ အပေါ် ဖိနှိပ် လာသည့် အခြေအနေ တွင် မိမိတို့ လုပ်နိုင်သည့် ကိရိယာများ အလုပ်များကို အသုံးချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်မှု အတွက် မျှော်လင့်ချက်သည် ယနေ့ မနေ့ကထက်ပို၍ များ ပါသည်။ အင်အား ဆိုသည် ချိန်ခွင် လျှာ သည် ယနေ့ ပါလက်စတိုင်းများ ၏ ရပိုင်ခွင့် အတွက် အပြည့်အဝ အလေး သာပေး နေပါသည်။
ရန်သူ ဇီယွန် (အစ္စရေး ) သည် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမို၍ အားနည်း အားပျော့ ၍ လာပါသည်။ ၎င်း၏ စစ်တပ် သည် မိမိကိုယ် ကို မရှုံး နိုင်ဟု ညာသံပေးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ လက်ဘနွန် နှင့် ၃၃ ရက်တာ တိုက်ပွဲဝင်ချိန် ၊ ဂါဇာ နှင့် ၂၂ ရက် နှင့် ၈ ရက် တိုက်ပွဲဝင်ချိန် အရှုံး နှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီး မည်သည့် အခါ မှ အောင်ပွဲခံရမည်မဟုတ်တော့သည် စစ်တပ် အဖြစ်သို့ ရောက်သွားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ မှ ၂နှစ်တာ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၄ ကြိမ် ကျင်းပ ပေးခဲ့ ရပါသည်။ ၎င်း၏ လုံခြုံရေး အခြေ အနေသည် ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့် မှုနှင့်ရင်ဆိုင် နေရပါသည်။ ဂျူးလူမျိုးများ အကြား ပြောင်းပြန် နေ့စဉ်ပြောင်းရွေ့ မှုဘက်သို့ စိတ်ဝင်စားမှု တိုးတိုးလာသည့် အတွက် ဤအရှုပ်တော်ပုံ အစိုးရ အတွက် ပိုမို၍ အရှက်ကွဲမှု ကို ဖြစ်စေပါသည်။
အမေရိကန် ၏ အကူအညီ ဖြင့် အချို့ အာရပ် နိုင်ငံများ နှင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး ၊ဆက်ဆံရေး များကို ပြုလုပ်ပြီး ပုံမှန် အခြေအနေ သို့ ရောက်လာရန် ၎င်း၏ အဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်း မှုသည်လည်း ဤအစိုးရ၏ အားနည်းချက် ၏ လက္ခဏာ နောက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လည်း ဤသို့ပြုခြင်း ဖြစ်လည်း ၎င်းအတွက် ဘာမှ အကျိုး ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ချေ။ ဆယ်နှစ်ကျော် အလျင်ကတည်း အီဂျစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ခိုင်မာအောင် ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်နှင့်ယှဉ်လျင် ယခု အချိန် ဇီယွန် (အစ္စရေး) အစိုးရသည် အလွန်တရ ပိုမို၍ အားနည်း အားပျော့ သွား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေ တွင် ၎င်း အနေဖြင့် အားနည်းအားပျော့ သည့် နိုင်ငံအချို့ နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်လိုက်လျှင် ၎င်း အတွက် လွတ်မြောက်မှု ကို ရနိုင်မည် လား? ထို နိုင်ငံများ ကိုလည်း ဤ ဆက်သွယ်မှု ဖြင့် မည်သည့် အကျိုး အမြတ် မှ ရှိမည် မဟုတ်ချေ။ ရန်သူ ဇီယွန် (အစ္စရေး ) အနေဖြင့် ၎င်း(အားပျော့အားနည်း အာရပ်နိုင်ငံ) တို့၏ နိုင်ငံ (မြေ) နှင့် ငွေကြေးကို သုံးစွဲ မည် ။ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ ထံတွင် မကောင်း မှုများ နှင့် မလုံခြုံမှုများကို ဖြန့်ဝေ ပါလိမ့်မည်။
သို့သော် ဤ ဖြစ်ရပ်မှန် များကို ကြည့်၍ အခြားသူများ အနေဖြင့် ဤ လှုပ်ရှား နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့၏ ကြီးမားသည့် တာဝန် ဝတ္တရား ကို မမေ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မွတ်စလင်မ် အိုလမာ နှင့်ခရစ်ယာန် အိုလမာ(သာသနာပညာရှင်ကြီးများ) အနေဖြင့် ဇီယွန် (အစ္စရေး)အစိုးရ နှင့်ဆက်သွယ်မှု ကို တရားတော် အရ မပိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်သင့်ပေသည်။ လွတ်လပ်ရေးကို မြတ်နိုးသူများ နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ သည့် ပညာရှင်များ အားလုံး ကို ပါလက်စတိုင်း ၏ နောက်ကျောကို ဓားနှင့်ထိုးခြင်း ၊သစ္စာဖောက် ခြင်း ၏ ရလာဒ်များ နှင့်ပတ်က်ပြီး အသိပေး သင့် ပါသည်။
ဇီယွန် (အစ္စရေး) အစိုးရ ကျဆုံး ရန်အတွက် ပွိုင့် မှာ ခုခံ ကာကွယ် ရေး စွမ်းအား ကို တိုးပွား အောင်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးအနာဂတ်အတွက် အောင်မြင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကာကွယ်ရေး နှင့် စစ်အင်အား ကို တိုးမြှင့် ခြင်း၊ ထိရောက်သည့် လက်နက်များ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်ပြီး တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည် စိတ်ချ ခြင်း၊ လူငယ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုယ် ကို အသိအမြင်ကို တိုးပွား အောင် ပြုခြင်း ၊ ပါလက်စတိုင်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ နှင့် ပြည်ပ တွင် ခုခံ ကာကွယ် မှု အား တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ၊ မကြာသေးမီ က အလ်အက်ဆွာ ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် အား ကာကွယ် ရန် အတွက် လူငယ်များ ၏ အုံ ကြွမှု ဖြစ်ခြင်း သည် ကမ္ဘာနေရာများ ရှိ လူထု အမြောက်အများ ၏ အမြင်တွင် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးတို့ ၏ ရှုန်းကန် လှုပ်ရှား မှု နှင့် အဖိနှိပ်ခံ အရက်စက်ခံရမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း ရောင်ပြန်ဟပ် စေပါ သည်။
ပါလက်စတိုင်း ခုခံကာကွယ်ရေး ယုတ္တိဗေဒ နှင့် ပတ်သက်ပြီး အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ မှ ကုလသမဂ္ဂ မှတ်တမ်း တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး စိတ်ဝင်စားစရာယုတ္တိဗေဒ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပါလက်စတိုင်း မိုဂျဟစ်ဒ်များ (အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူများ၊သူကျွန်ဘဝ မရောက်အောင် ကြိုးပမ်းသူများ ) ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူ ၊ပြည်သားများ အားလုံး နှင့် အတူ ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန် ကိစ္စကို တင်ပြနိုင်ပါသည်။ ဤ ဆန္ဒခံယူ ပွဲဖြစ် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ စနစ် သတ်မှတ် နိုင်မည်။ ဤပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ သား အစစ် များသည် မည် သည့် လူမျိုး၊ မည်သည့် ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ ဖြစ်ပါစေ ယုတ်စွ ပြည်ပြေးသည့်ဘဝနှင့် နေနေရသည့် ပါလက်စတိုင်းသားများပင် ဖြစ်စေဆန္ဒခံယူပွဲ တွင် ဝင်ရောက် ပါဝင်ရပေမည်။ ဤဆန္ဒခံယူပွဲ သည် ပြည်ပြေး ပါလက်စတိုင်း များကို မိမိနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည် ခေါ်ယူပေမည်။ ပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း မှီတင်း နေထိုင်နေသည့် ပါလက်စတိုင်း မဟုတ်သူများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပေမည်။
ဤတောင်းဆိုချက် သည် ဒီမိုကရေစီ ၏ နိယာမ ကို အခြေခံထားပါသည်။ ဤ နိယာမ ကို ကမ္ဘာ က အသိအမှတ်ပြုလက်ခံ ထားပြီး မည်သူမျှ ဤ နိယာမ ၏ တိုးတက်မှု ကို မထိခိုက် နိုင်ချေ။
ပါလက်စတိုင်း မိုဂျဟစ်ဒ်များ (အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသူများ၊သူကျွန်ဘဝ မရောက်အောင် ကြိုးပမ်း သူများ ) အနေဖြင့် ကျူးကျော်အစိုးရ ၊ တရားမဝင် အစိုးရ အား ၎င်းမတတ်နိုင် သည့်အဆုံး လက်ခံ ရသည့် အထိ ၎င်းတို့အား ဥပဒေ နည်းအရတစ်မျိုး စာရိတ္တဆိုင်ရာဖြင့် တစ်နည်း တော်လှန် လှုပ်ရှား ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ နာမတော် ဖြင့် ရှေ့ သို့ ဆက်တက်ရပါမည်။ لینصرنّاللہمنینصرہဆို သည်ကို သိထား ရပါမည်။
 စူရဟ် သူရ် ၊ အာယသ်တော် အမှတ် ၄၂ ။ ။ ၎င်းတို့သည် လှည့်စား လိုကြပါသည်။သို့သော် ကာဖေရ် ဖြစ် သွားကြလေ၏ ။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့လှည့် ကွက်တွင် မိသွားကြလေ၏။
 စူရဟ် ယူစွဖ် ၊ အာယသ်တော် အမှတ် ၂၁ ။ ။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် သည် မိမိ အလုပ် (မှန်သမျှကို) စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူပါသည်။ သို့သော် လူ ထု အများစု သည် မသိရှိကြပေ။